Indy Business Makeover: Oge mmechi bụ Echi! | Martech Zone
Mgbe m nọ na Houston, otu n’ime ndị kwuru okwu kwuru otu ụlọ ọrụ ga-esi tinye ego karịa na ebe ha na-anabata ndị ọbịa karịa ka ha ga-emefu ha online ọnụnọ. Ọ dịghị onye na-ajụ onye na-eme ihe ndina ihe nlọghachi na ntinye ego dị na sofa mara mma maka oghere ahụ - mana onye ọ bụla na-egbutu ma na-apụ apụ na-efu nke a ọhụrụ website.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eleghara atụmatụ ahụ anya kpamkpam - na-arụsi ọrụ ike na atụmatụ ha ugbu a iji chegbu onwe gị banyere otu online ahia azum. Ebe nrụọrụ weebụ gị ga-enweta ọtụtụ ndị ọbịa karịa oghere gị na nnukwu atụmatụ na atụmatụ dị n'azụ ya! Ọ bụ oge maka a makeover, ma ọ bụ ike yie ndị ziri ezi na-efu… fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume a na aku na uba. Ruo ugbu a…
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na etiti Indiana, nke a bụ ohere! Maka otu ụlọ ọrụ mpaghara, Indy Business Makeover Competition ga-abụ ezigbo ume ọhụrụ. Ndị mmeri ga-enweta ọrụ ahịa, ihe nkesa ọhụrụ, Ebe nrụọrụ weebụ na arịa ụlọ ọrụ n'etiti ihe nrite ndị ọzọ. Na ihe karịrị $ 80,000 nke ngwaahịa na ọrụ enyere site na azụmahịa dị n'ógbè ahụ, Indy Business Makeover Competition na-agwa ndị nwe ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike, “nwee obi ụtọ ịgbanwe anyị, unu enwetawo ya.”
Oge njedebe ngwa ngwa bụ echi - July 29, 2009! Lelee ndepụta nke onyinye - ha gụnyere ngwungwu 40 blog na Compendium Blogware, kwa! Aga m ahụ ma m nwere ike ịgwa ndị otu ahụ ka m tụfuo ngwungwu nyocha nke $ 3,000 kwa ọnwa n'ime mgbanaka - iji nyere aka na atụmatụ ọdịnaya, njikọta mmekọrịta mmekọrịta, nyocha nlegharị, wdg.
Nnukwu ọrụ site na ndị folks na Obere Igbe na Azụmaahịa Pivot maka itinye nnukwu asọmpi a.
Tags: automatticbidoro databọọdụ mkpọsaGuy kawasakiivarsivars akwụkwọ akụkọ hoaxivars ngwa ngwachukwunonsovideo mgbasa ozi